अमिताभको दिवाली पार्टीमा आगलागी !
काठमाडौं । बलिउड महानायक अमिताभ बच्चन र उनको परिवारले दिवालीमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी दिने गर्छन् । गत बर्ष अमिताभ बच्चनको दिवाली पार्टीमा ऐश्वर्या रायको म्यानेजरको लेहंगामा आगो लागेको थियो । सो आगो शाहरुख खान र ऐश्वर्यले निभाए। कोरोना भाइरसको कारण बच्चन परिवारले यस वर्ष कुनै ठूलो कार्यक्रम आयोजना गरेका छैनन् । पारिवारिक सदस्यको मृत्यु भएका कारण पनि दिवाली नमनाएका हुन्।
गत बर्षको दिवाली पार्टीमा ऐश्वर्या रायको म्यानेजर अर्चना सदानंदको कपडामा आगो लागेको थियो । घटनालाई लिएर शाहरुख खानको पीआर टीमले पहिले बाजी मारेको थियो । टीमले शाहरुखलाई यस घटनाको नायक बनाएका थिए । तर ऐश्वर्याको म्यानेजरको जीवन शाहरुख खानले नभइ ऐश्वर्या रायले बचाएकी थिइन् ।
अङ्ग्रेजी ट्याब्लोइड मिडडेले पहिलो पटक अमिताभ बच्चनको दिवाली पार्टीमा अर्चना सदानन्दको लेहंगामा आगो लागेको र अर्चनालाई आगोबाट बचाउनेको श्रेय शाहरुख खानलाई दियो। यसका साथै सलमान खानले इन्स्टाग्राममा एक पोस्ट शेयर गरे। सो पोष्टको साथ प्रकाशित भिडियोमा शाहरुख खानको शर्ट जलेको देखिन्छ र शाहरुख निस्फिक्रि देखिन्छन्। सँगै, सलमान खानको आवाज चलिरहेको छ , "नायक त्यो हो जसले आगोमा गएर अरुलाई बचाउछ ।"
वास्तवमा अर्चना सदानन्दको लेहंगामा आगो लागेपछि ऐश्वर्या रायले आफैंले उनको जीवन बचाउन अघि सरिन् । उनी अर्चनाको छेउमा नै थिइन् । जसै लेहंगामा आगो लाग्नाले पार्टीमा हिल्ला मच्चियो उनले अर्चनाको लंहगा च्यातेर उनको शरीरबाट अलग गरिन् र आगोलाई निभाइन् । यसपछि अलि पर उभिएका शाहरुख खानले आफ्नो सेरवानी खोले र अर्चनाको शरीर छोपिदिए।
कन्चनपुरका तरुण नेता रमेश अर्यालको दाउन्नेमा सडक दुर्घटनामा निधन
माछा मारेर दैनिकी चलाउनेलाई करोडौँ राजश्व छलीको मुद्दा !
माछा मार्नेक्रम बढेपछि सामुद्रिक जीवनचक्रमै असर, विशाल शार्कहरुमा डरलाग्दो ह्रास
१६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि नेपाली सेनाले स्वेच्छिक अवकाश लिएर निवृत्तभरण पाउने
चिनी मिलका सञ्चालक अग्रवाल त्रिपुरेश्वरबाट समातिए, सर्लाही लगियो
पुनःनिर्माणपछि जापानले हस्तान्तरण गर्‍यो विपी राजमार्ग